News | MyanmarJobsDB
Comments Off on Schindler-CVT Vertical Transportation Certification Program အတွက် သင်တန်းသားများခေါ်ယူခြင်း
Posted by myothiha_rebbiz | March 31, 2016 | Articles, Training/Education
Schindler အုပ်စုသည် ဆွစ်ဇလန်နိုင်ငံတွင်အခြေစိုက်ပြီး ဓါတ်လှေကားများနှင့် စက်လှေကားများကို နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၀ ကျေ်တွင် ဝန်ထမ်းပေါင်း ၅၄,၀၀၀ ကျော်ဖြင့် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေသော ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် Myanmar Jardine Schindler Ltd. သည် ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှစတင်ကာ ရုံးခွဲဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ရန်ကုန်မြို့တွင်ရုံးချုပ်တည်ရှိပြီး မန္တလေးနှင့်နေပြည်တော်တို့တွင် ရုံးခွဲများဖွင့်လှစ်ကာ ဈေးကွက်တွင်ဦးဆောင်နေသည့်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ဂုဏ်ယူစွာလုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ Myanmar Jardine Schindler သည် အဆောက်အဦးအမျိုးအစားအားလုံးတို့အတွက် ဓါတ်လှေကား၊ စက်လှေကားနှင့် ရွေ့လျားစက်လှေကားများကို ရောင်းချတပ်ဆင်ဝင်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။
Myanmar Jardine Schindler သည် ဆွစ်ဇလန်နိုင်ငံ Non-Profit အဖွဲ့အစည်းမှ မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်များအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်းများ အောင်မြင်စွာဖွင့်လှစ်ထားသည့် Center for Vocational Training (CVT) နှင့်ပူးပေါင်းပြီး ဓါတ်လှေကားနှင့် စက်လှေကားနယ်ပယ်တွင်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုလိုသည့် ဘွဲ့ရလူငယ်များအတွက် မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပထမဦးဆုံးဖြစ်သည့် Schindler-CVT Vertical Transportation Certification Program သင်တန်းကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် စာတွေ့လက်တွေ့များဖြင့် အောင်မြင်စွာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ယခု ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်ဖွင့်လှစ်မည့် နှစ်နှစ်တာသင်တန်းအတွက် သင်တန်းသားများကိုစတင်လက်ခံနေပြီဖြစ်သည်။
Posted by myothiha_rebbiz | December 23, 2015 | News, Scholarship, Training/Education
Stamford International University, Bangkok Thailand မှ မြန်မာ ကျပ်ငွေ သိန်း ၁၀၀ ဝန်းကျင်သာကုန်ကျသော (၁ နှစ်) MBA ဘွဲ့နှင့် စာသင်နှစ်တစ်နှစ်လျင် သိန်း ၅၀ ခန့်သာကုန်ကျသော Internship ပါဝင်သည့် Bachelor Degree များအကြောင်း ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲကို January 10, 2016 (Sunday) တွင် Park Royal Hotel ၌ ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။
Stamford International University (STIU) တွင် နိုင်ငံပေါင်း ၆၀ ကျော်မှ ကျောင်းသားများ လာရောက်ပညာဆည်းပူးကြပြီး၊ အနောက်နိုင်ငံများမှ ဆရာများနှင့် ပညာသင်ကြားနိုင်သော Truly International University တစ်ခုဖြစ်သည်။ SITU သည် အမေရိကန်နိုင်ငံပညာရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် Laureate International Universities နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသောကြောင့် နိုင်ငံတစ်ကာအသိအမှတ်ပြု ဘွဲ့များကို ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ကျောင်းစားရိတ်သက်သာစွာဖြင့်ရယူနိုင်ပြီး၊ ပညာသင်ကြားနေစဉ်အတွင်း ဥရောပနိုင်ငံရှိတက္ကသိုလ်များသို့သွားရောက်၍ ဆက်လက်ပညာသင်ကြားနိုင်သော Student Exchange Program များလည်းပါဝင်သည်။ နိုင်ငံတစ်ကာမှ ကျောင်းသားများနှင့်ဆရာများ အများဆုံးပညာသင်ကြားရာကျောင်းဖြစ်သောကြောင့် Global Networking ရယူနိုင်သောကျောင်းတစ်ကျောင်းလည်းဖြစ်သည်။
အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက Email: [email protected] နှင့် Website: www.stamford.edu သို့ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Posted by MyanmarJobsDB | September 26, 2015 | News, Scholarship, Training/Education
အင်္ဂလန်နိုင်ငံရှိ City of Oxford College (အစိုးရကောလိပ်) မှပေးအပ်မည့် စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှု ဒီပလိုမာ ကို အောက်တိုဘာလ (၁၁) ရက်နေ့ တန်းခွဲအတွက် စတင်လျှောက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း iAcademic Institute မှသိရှိရသည်။ အဆိုပါ ဒီပလိုမာဘာသာရပ် တွင် စီးပွားရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်များဖြစ်သည့်
Principles of Accounting နှင့်
Management & Organisational Behaviour ဘာသာရပ်များကို City of Oxford College မှ ချမှတ်ထားသည့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း နှင့် စာမေးပွဲပုံစံ များအတိုင်း ဘာသာရပ်အလိုက် ပိုင်နိုင်ကျွမ်းကျင်စွာ သင်ကြား ပေးနိုင်ပြီး City of Oxford College မှ အသိအမှတ်ပြုပေးထားသော ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ အတွေ့အကြုံရှိ ဆရာ၊ ဆရာမကြီးများ မှ သင်ကြားပို့ချ စစ်ဆေးပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
တစ်ပတ်လျှင် (၄) ရက် ရုံးချိန်လွတ် တက်ရောက်ရမည်ဖြစ်ပြီး သင်တန်းကာလ (၅) လကြာမြင့်မည်ဖြစ်သည်။ သင်တန်းကြေးများကိုလည်းအရစ်ကျခွဲသွင်းနိုင်ပါသည်။
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်မြင်ထားသူများ ၊ တက္ကသိုလ် တက်ရောက်နေဆဲ သူများ ၊ လုပ်ငန်းခွင် ၀င်ရောက်နေသူများ ၊ ဘွဲ့တစ်ခုခု ရရှိထားပြီးသူများ တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
အသေးစိတ်သိရှိလိုသူများ iAcademic Institute ဖုန်း ၀၉-၂၅၄၈၃၁၉၁၁၊ ၀၁ ၅၃၉၁၃၀၊ (သို့မဟုတ်)
အခန်း (၈၀၃)၊ ၈လွှာ၊ ပန်းခြံတာဝါ၊ မြေနီကုန်း။ သို့ ဆက်သွယ် စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Comments Off on City of Oxford College, UK မှ ပေးအပ်မည့် စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှု ဒီပလိုမာ
Posted by myothiha_rebbiz | August 12, 2015 | News, Training/Education
အင်္ဂလန်နိုင်ငံရှိ City of Oxford College (အစိုးရကောလိပ်) မှပေးအပ်မည့် စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှု ဒီပလိုမာ ကို သြဂုတ်လ (၁၈) တန်းခွဲအတွက် စတင်လျှောက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း iAcademic Institute မှသိရှိရသည်။ အဆိုပါ ဒီပလိုမာဘာသာရပ် တွင် စီးပွားရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်များဖြစ်သည့်
Posted by MyanmarJobsDB | August 3, 2015 | News, Scholarship, Training/Education
ရုရှားပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ၏ အသိအမှတ်ပြု ဖြစ်ပြီးအစိုးရတက္ကသိုလ် ဖြစ်သော SouthWest State University မှ ပေးအပ်မည့် Master of Business Administratin (MBA) ကို စက်တင်ဘာလ ကျောင်းခေါ်ချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ iAcademic Institute ၌ တက်ရောက်ရန်အတွက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။.စုစုပေါင်း ဘာသာရပ် (၁၂) ခု ဖြစ်သော
(1) Marketing Management (2) Managerial Finance and Accounting, (3) Business Research (4) Project Management (5) Managerial Economics (6) Human Resource Management (7) International Business and Trade (8) Management (9) Business Development Management (10) Operations Management (11) Strategic Management (12) Leadership and Organizational Behavior နှင့် Capstone Project (၁) ခု ပါဝင်မည်ဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်းကာလ (၁၄) လကြာမြင့်မည်ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများ၊ သင်ကြားမှုပုံစံများ၊ Assessment Method များအတိုင်း ကို SouthWest State University မှ အသိအမှတ်ပြု ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ အတွေ့အကြုံ ရှိ ဆရာ၊ ဆရာမကြီးများ မှ သင်ကြား ပို့ချပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် SouthWest State University မှ ချမှတ်ပေးထားသော Case Study များ၊ ဖြင့် လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေ၊ အခက်အခဲများကို မိမိတို့ ၏ ကိုယ်ပိုင် စဉ်းစား ဆုံးဖြတ်မှု များ နှင့်ဆန်းစစ်အဖြေရှာ ကြရမည်လည်းဖြစ်သည်။ အတန်းချိန်များကိုလည်း ရုံးချိန်လွတ် စီစဉ်ထားပေးထားပါသည်။ သင်တန်းကြေးများကို လည်း အရစ်ကျစနစ်နှင့် ပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။
ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိပြီးသူများ (သို့မဟုတ်) အသိအမှတ်ပြု ဒီပလိုမာလက်မှတ်တစ်ခုခု နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံ (၂) နှစ်ရှိထားပြီး အသက် (၂၂) နှစ်ပြည့်ပြီးသူများတက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
တက်ရောက်လိုသူများ iAcademic Institute ( ph no : 09 254831911, 01 539130 ) အခန်း (၈၀၃) ၈ လွှာ၊ ပန်းခြံတာဝါ မြေနီကုန်းသို့ ဆက်သွယ် စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Comments Off on Inspiro Institute မှ Institute of Leadership and Management(UK) မှတိုက်ရိုက်ချီးမြှင်.သောစီးပွားရေးစီမံခန်.ခွဲမှု နှင်. ခေါင်းဆောင်မှု သင်တန်းများဖွင်.လှစ်မည်
Posted by Lin Naung | May 11, 2015 | News, Training/Education
တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ.မြန်မာနိုင်ငံရဲ. စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် စွမ်းရည်ပြည်.၀သော စီမံခန်.ခွဲမှုကျွမ်းကျင်သူများနှင်. မန်ဂျောများလေ.ကျင်.မွေးထုတ်ပေးရန်၊ နိုင်ငံတစ်ကာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ နှင်.တန်းတူယှဉ်ပြိုင်မှုစွမ်းရည်ပြည်.၀သော ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်များအားအချိန်တိုအတွင်းအထိရောက်ဆုံးလေ.ကျင်.သင်ကြားပေးရန်နှင်.လူငယ်လူရွယ်များအား ခံစားခွင်.လစာမြင်.မားသောအလုပ်အကိုင်များရရှိနိုင်ရန် စတဲ.ရည်ရွယ်ချက်များနဲ. Inspiro Institute ကိုဖွဲ.စည်းတည်ထောင်ခဲ.ပါတယ်။
Inspiro Institute ဟာ Institute of Leadership and Management,(ILM) UK ၏ မြန်မာနိုင်ငံ၏ထမဆုံး နှင်.တစ်ခုတည်းသောတရားဝင်အသိအမှတ်ပြု ခံရတဲ. Management Development center ဖြစ်ပါတယ်။
ILM(UK) ဟာဥပရောပမှာပထဆုံးနဲ.UK ရဲ.အကြီးမားဆုံးနဲ. အကျယ်ပြန်.ဆုံးစီမံခန်.ခွဲမှုဖွံ.ဖြိုးရေး နှင်.လေ.ကျင်.သင်ကြားရေးအဖွဲ.အစည်းဖြစ်ပါတယ်။ ILM UK ဟာ နိုင်ငံတစ်ကာမှ Supervisor များအကြီးတန်းမန်နေဂျာများစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ပေါင်းခုနှစ်သိန်းခွဲ ၇၅၀၀၀၀ ကျော် ကိုလေ.ကျင်.သင်ကြားပေးပြီးဖြစ်တယ်။ လက် ရှိ နိုင်ငံတစ်ကာမှ စီမံခန်.ခွဲမှု မန်နေဂျာသုံးသောင်းငါးထောင် ၃၅၀၀၀ ကျော် ပါဝင်တဲ. Membership အဖွဲ.အစည်းတစ်ခုလဲဖြစ်ပါတယ်။
Inspiro Institute အနေနဲ.မကြာမှီမှာ ILM UK မှတိုက်ရိုက်ချီးမြှင်.မယ်.စီးပွားရေးစီမံခန်.ခွဲမှု နှင်. ခေါင်းဆောင်မှု ဖွံဖြိုးရေးသင်တန်းများကိုပို.ချပေးတော.မှဖြစ်ပါတယ်။
Inspiro Institute မှ
၁။ “Executive Development Program in Human Resource Management”
HRမန်နေဂျာများအတွက်(သို.မဟုတ်) HR မန်နေဂျာအဖြစ်လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက်လိုသူများ (သို.မဟုတ်) ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွင် HR လုပ်ငန်းစဉ်များကို နိုင်ငံတစ်ကာစံချိန်စံညွှန်းများဖြင်.စနစ်တစ်ကျ စီမံခန်.ခွဲလိုသူများအတွက်Program.
၂။ “Executive Development Program in Project”
Project မန်နေဂျာများအတွက်(သို.မဟုတ်) Projectမန်နေဂျာအဖြစ်လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက်လိုသူများ (သို.မဟုတ်) ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွင်Project Management လုပ်ငန်းစဉ်များကိုနိုင်ငံတစ်ကာစံချိန်စံညွှန်းများဖြင်.စနစ်တစ်ကျစီမံခန်.ခွဲလိုသူများအတွက် Program.
၃။ “Executive Development Program in Tourism Management”
ခရီးသွားလာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများမှမန်နေဂျာများအတွက်(သို.မဟုတ်) Tourism Sector တွင် မန်နေဂျာအဖြစ်လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက်လိုသူများ (သို.မဟုတ်) ကိုယ်ပိုင်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းတွင်Tourism Management လုပ်ငန်းစဉ်များကိုနိုင်ငံတစ်ကာစံချိန်စံညွှန်းများဖြင်.စနစ်တစ်ကျစီမံခန်.ခွဲလိုသူများအတွက်Program
၄။ “Executive Development Program in Service Leadership”
Service Oriented Industry များဖြစ်သောလေကြောင်းလိုင်း၊ ဟိုတယ်များ၊ဘဏ်များမှ မန်နေဂျာများ(သို.မဟုတ်) Service Sectors တွင်မန်နေဂျာအဖြစ်လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက်လိုသူများ (သို.မဟုတ်) ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွင်နိုင်ငံတစ်ကာလုပ်ငန်းများတန်းတူ Customer Service ကိုအလေးထားလိုသူများအတွက် Program
ဆိုပြီး Executive Development Program series ၄ ခုကိုဖွင်.လှစ်ထားပါတယ်။ သင်တန်းအားလုံးကိုရုံးချိန်ပြင်ပအတန်းများသာဖွင်.လှစ်ထားပြီးသင်တန်းတက်ရောက်လိုသူများပိုမိုအဆင်ပြေစေရန် Sunday class နှင်. ရုံးချိန်ပြင်ပတန်းသင်တန်းချိန် နှစ်ချိန် မှ ကြိုက်ရာရွေးချယ်တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
ILM,UK မှတိုက်ရိုက်ချီးမြှင်.သော Professional Qualification ကြေး၊သင်တန်းကြေး၊ learning materials ကြေး၊ ILM,UK Studying member ကြေးအားလုံးအပြီးအစီးကျပ်နှစ်သိန်းခွဲ(၂၅၀,၀၀၀) ကျပ်သာကျသင်.မှာဖြစ်ပါတယ်။ ILM,UK မှတိုက်ရိုက်ချီးမြှင်.သော Professional Qualifications ရရှိရန်တော. သင်တန်း ချိန်အပြည်.အ၀တက်ရောက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။
တက္ကသိုလ်ဝင်တမ်းဖြေဆိုအောင်မြင်ပြီးတက္ကသိုလ်တက်ဆဲလူငယ်များအတွက်၊ (သို.မဟုတ်) ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လိုသောလူငယ်များအတွက် Leadership Development program for Youth Entrepreneurs Program ဆိုပြီးလဲနေ.တက် ၁ လ Program တစ်ခုလဲရှိပါတယ်။
Inspiro Institute ရဲ. သင်တန်းအားလုံးဟာအချိန်တို(အချိန် ၂ လ အတွင်း) နိုင်ငံတစ်ကာအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိနိုင်ခြင်း၊ သင်တန်းအားလုံးအတွက်အတွက်လုပ်ငန်းခွင်အတွေ.အကြုံရှိအကြီးတန်းမန်နေဂျာများ နှင်. သင်ကြားရေးအတွေ.အကြုံပြည်.၀သော နိုင်ငံတစ်ကာမဟာဘွဲ.ရ၊ပါရဂူဘွဲ.ရဆရာဆရာမများ က ပူးပေါင်းသင်ကြားခြင်း၊ သင်တန်းသားအားလုံးကို နိုင်ငံတစ်ကာ မှ စီမံခန်.ခွဲ.မှုမန်နေဂျာများ နှင်. Network ရရှိနိုင်ရန်၊ စီမံခန်.ခွဲမှု စာပေ၊အသိပညာစာတမ်းများရရှိနိုင်ရန် ILM ၏ membership ကို ၆ လအခမဲ.ပေးခြင်း၊ သင်ရိုးများကိုလဲ ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းများ၏ လက်ရှိအခြေအနေ၊ နိုင်ငံတစ်ကာစီမံခန်.ခွဲမှုပညာရပ်များ၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဖွံ.ဖြိုးမှု သုံးနားညီ model ဖြင်. ရေးဆွဲထားခြင်း၊ lecturing အပြင်၊ role play၊ Simulation။ project များဖြင်. လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းတိုက်ရိုက်အသုံးဝင် အောင်သင်ကြားပေးခြင်း၊ ရုံးချိန်လွတ်အတန်းများနှင်. မိမိအဆင်ပြေသည်.အချိန်ညှိနှိုင်းတက်ရောက်နိုင်အောင် စီစဉ်ပေးထားခြင်းစတဲ. တမူထူးခြားဆန်းသစ်မှုမျာစွာနဲ.အကျိုးကျေးဇူးများစွာရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
InspiroInstite ၏ သင်တန်းများအကြောင်းအသေးစိတ်သိရှိလိုပါက
Inspiro Institute အခန်း ၄၀၄ မိုးစန္ဒာ ကွန်ဒို၊ မိုးစန္ဒာလမ်းလှည်းတန်းကမာရွတ်၊ ဖုန်း ၀၉၉၇ ၈၇၈ ၆၄၆၅၊ ၀၉၂၅၄၃၇၉၅၄၅၊ ၀၉၅၁၄၅၅၃၀ [email protected] သို.ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
Posted by Lin Naung | March 11, 2015 | News, Training/Education
Schindler အုပ်စုသည် ဆွဇ်ဇလန်နိုင်ငံတွင် အခြေစိုက်ပြီး နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၀ ကျော်တွင် ၀န်ထမ်းပေါင်း ၅၄,၀၀၀ ကျော်ဖြင့် ဓာတ်လှေကား နှင့် စက်လှေကားများဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေသော ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီ တစ်ခုဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် Myanmar Jardine Schindler Ltd. သည် ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ ရုံးဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်တွင်ရုံးချုပ်တည်ရှိပြီး မန္တလေး နှင့် နေပြည်တော်တွင်ရုံးခွဲများဖွင့်လှစ်ကာ ဈေးကွက် တွင်ဦးဆောင်နေသည့်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ဂုဏ်ယူစွာလုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ Myanmar Jardine Schindler သည် အဆောက်အဦးအမျိုးအစားအားလုံးအတွက် ဓာတ်လှေကား၊ စက်လှေကား နှင့် ရွေ့လျားစက်လှေကားများကို ရောင်းချတပ်ဆင်ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။
Myanmar Jardine Schindler သည် ဆွဇ်ဇလန်နိုင်ငံ Non-profit အဖွဲ့အစည်းမှ မြန်မာနိုင်ငံ လူငယ်များအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများ အောင်မြင်စွာဖွင့်လှစ်ထားသည့် Center for Vocational Training (CVT) နှင့် ပူးပေါင်းပြီး ဓာတ်လှေကား နှင့် စက်လှေကားနယ်ပယ်တွင် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုလိုသည့် အင်ဂျီနီယာဘွဲ့ရလူငယ်များအတွက် မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပထမဆုံး ဖြစ်သည့် Schindler-CVT Vertical Transportation Certification Program သင်တန်းကို စာတွေ့လက်တွေ့ များဖြင့် တစ်နှစ်သင်တန်းဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ Schindler-CVT Vertical Transportation Certification Program အတွက် A.G.T.I (Mechnical, Electrical, Mechatronic) နှင့် B.E (Mechnical, Electrical and Mechatronic) ဘွဲ့ရများလျှောက်ထားနိုင် ပါသည်။
သင်တန်းကာလအတွင်း CVT သင်တန်းကျောင်းမှ ဆရာ/ဆရာမကြီးများ နှင့် Schindler ကုမ္ပဏီ၏ Technical Specialist များမှလည်း အကောင်းမွန်ဆုံး စာတွေ့လက်တွေ့များဖြင့် သင်ကြားပေး သွားမည်ဖြစ်သည်။ သင်တန်းကာလမှာတစ်နှစ်ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၅ မေလတွင် သင်တန်းစတင်ဖွင့်လှစ် မည်ဖြစ်သည်။
သင်တန်းပြီးဆုံးပါက သင်တန်းသားများကို Schindler တွင်အလုပ်ခန့်ထားသွားမည်ဖြစ်သည်။
သင်တန်းကာလအတွင်းတွင် သင်တန်းကြေးပေးစရာမလိုဘဲ ကုမ္ပဏီမှပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး လည်းပေးထားမည်ဖြစ်သည်။
Comments Off on University of Chester, UK ၏ ( ၁ ) နှစ် MBA ဘွဲ့ ကိုစင်ကာပူနိုင်ငံတွင် ၃၀%ပညာသင်ဆု အစီအစဉ် ဖြင့် March 2015 Intake တွင်တက်ရောက်နိုင်ရန် အင်္ဂလိပ်စာ အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲကျင်းပပြုလုပ်မည်။
University of Chester, UK ၏ ( ၁ ) နှစ် MBA ဘွဲ့ ကိုစင်ကာပူနိုင်ငံတွင် ၃၀%ပညာသင်ဆု အစီအစဉ် ဖြင့် March 2015 Intake တွင်တက်ရောက်နိုင်ရန် အင်္ဂလိပ်စာ အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲကျင်းပပြုလုပ်မည်။
Posted by Lin Naung | January 16, 2015 | News, Scholarship, Training/Education
မြန်မာနိုင်ငံမှ ကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက် University of Chester, UK မှ ပေးအပ်မည့် MBA ဘွဲ့ကို စင်ကာပူနိုင်ငံ Dimensions International College, City Campus တွင် ၃၀% ပညာသင်ဆုဖြင့် Sep 2014 Intake လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ ယင်းပညာသင်ဆု အစီအစဉ် အတွက် အင်္ဂလိပ်စာ အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲအား လာမည့် ဇန်န၀ါရီလ ( ၂၆ ) တနင်္လာနေ့တွင် နေ့လည် (၁း၀၀) မှ (၃း၀၀) အတွင်း ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
University of Chester သည် UK နိုင်ငံတက္ကသိုလ်ကြီးများတွင် အစောဆုံးတည်ထောင်ခဲ့သော နာမည်ကြီး တက္ကသိုလ်ကြီးများထဲတွင် တစ်ခုအပါအoင်ဖြစ်သည်။
ထို့ အပြင် UK နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး နှင့်စီမံခန့်ခွဲ မှု ဘာသာရပ်များကိုသင်ကြားပို့ချပေးလျှက်ရှိသောကျောင်းကြီး ( ၁၁၆ ) ကျောင်းအနက် Ranking ( ၃၇ ) ရရှိထားသော ကြောင့် နာမည်ကျော်ကြားပြီး ခိုင်မာမှုရှိသော တက္ကသိုလ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ယင်းတက္ကသိုလ်ကြီး၏စင်ကာပူနိုင်ငံ partner college တခုဖြစ်သော Dimensions International College တွင်လာမည့် March 2015 ကျောင်းဖွင့်ချိန်တွင် မြန်မာပြည်မှ ကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက် ၃၀% MBA ဘာသာရပ် ပညာသင်ဆုကိုချီးမြှင့်ပေးအပ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ စင်ကာပူ Dimenisons International College ၏ City Campus တွင် တက်ရောက်ရခြင်းဖြင့် ကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက် နေထိုင်စရိတ်အကုန်အကျသက်သာမည် ဖြစ်ပြီး ကျောင်းပြီးပါက UK နိုင်ငံ University of Chester မှ ပေးအပ်သော MBA ဘွဲ့ ကို တိုက်ရိုက်ရရှိနိုင် မှာဖြစ်ပါသည်။
ထို့ အပြင် အထူးအခွင့်အရေး အနေဖြင့် ပညာသင်ဆုရရှိသောကျောင်းသူကျောင်းသားများအနေဖြင့် ကျန်ရှိသောကျောင်းစရိတ်၏၇၀% ကျောင်းလခကို အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ပေးသွင်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။
သင်တန်းကာလ ( ၁ ) နှစ်ကြာမြင့် မည် ဖြစ်ပြီး စီမံခန့် ခွဲမှုဆိုင်ရာ ပညာရပ်များကို အခြေခံကျကျ နားလည်သဘောပေါက်လာစေရန်၊ ငွေကြေးနှင့် လူသားအရင်းအမြစ်များကို စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲတတ် လာစေရန် စသည်တို့ကို Case Study များ Assignments များ Individual and Group Project များဖြင့် ပေါင်းစပ်သင်ကြားမည် ဖြစ်ပါသည်။
စီမံခန့်ခွဲမှုအတွေ့အကြုံရှိထားပြီးသူများအနေဖြင့်လည်းမိမိတို့၏စီမံခန့်ခွဲမှု့အရည်အချင်းများကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်သောဘာသာရပ်မျိုးဖြစ်သည့်အတွက် Advanced management skills များကို ထိထိရောက်ရောက် အချိန်တိုအတွင်းလေ့လာနိုင်မည့် ဘာသာရပ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။
ထို့ပြင် Specialization ဘာသာရပ်အနေဖြင့် MBA ( project Management ) ဘာသာရပ်ကိုလည်း အထူးပြုတက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
ထို့ ကြောင့်ပညာသင်ဆုလျှောက်ထားလိုသော ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအတွက် English အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲကို Dimensions Education Center တွင် ဇန်န၀ါရီလ ၂၆ ရက် တနင်္လာနေ့ နေ့လည် (၁း၀၀-၃း၀၀) အတွင်း ကျင်းပပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပြီး စိတ်ပါဝင်စားသူ မည်သူမဆို ကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းပီး လာရောက်ဖြေဆိုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။ အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုလိုသူများ မိမိတို့၏ဘွဲ့လက်မှတ် မိတ္တူတစ်စုံယူဆောင်လာရပါမည်။
Dimensions International College ရန်ကုန်မြို့ ဖုန်း ၊ 09450044117 ၊ 09421076858 သို့ကြိုတင်စာရင်း ပေးသွင်းပြီး နိုင်ပါသည်။
Comments Off on IT Professional များအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းပြပွဲ “IT Career Day 2014”
IT Professional များအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းပြပွဲ “IT Career Day 2014”
Posted by Lin Naung | December 9, 2014 | Career Opportunity, News
MyanmarJobsDB နှင့် ရန်ကုန်မြို့အခြေစိုက် Lithan University College တို့ပူးပေါင်း၍ ကျင်းပမည့် အိုင်တီအလုပ်အကိုင်ပြပွဲ(IT Career Day 2014) ကို ဒီဇင်ဘာလ (၁၄) ရက် ၂၀၁၄ တွင် နတ်မောက်လမ်းရှိ Union Business Centre တွင် မနက် (၉) နာရီမှ နေ့လည် (၄) နာရီ အထိ ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
IT Career Day 2014 ပြုလုပ်ရခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ၀န်ထမ်းအလိုရှိနေသော အိုင်တီလုပ်ငန်း အဖွဲ့အစည်းများ နှင့်အလုပ် အလိုရှိနေကြသောလူငယ်များ၊ IT Professional များ တစ်နေရာတည်းတွင် အချိန်ကုန် ငွေကုန်သက်သာစွာဖြင့် တိုက်ရိုက် တွေ့ဆုံပြီး CV များလက်ခံခြင်း၊ အင်တာဗျူးများ ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း၊အလုပ်ခန့် အပ်နိုင်ခြင်းစသော ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ မိမိတို့ဘ၀တိုးတက်မှုအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ကောင်းများကို ရှာဖွေနေသော IT Professionals များအနေဖြင့် IT Career Day 2014 သို့ လာရောက်လေ့လာ လျှောက်ထားနိုင်ပါရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
ကျင်းပမည့်နေ့ 14 December 2014 (တနင်္ဂနွေ)
ကျင်းပမည့်အချိန် နံနက် 9း00 နာရီမှ ညနေ 4နာရီ ထိ
ကျင်းပမည့်နေရာ Lithan University College, Union Business Centre,
#02-07, နတ်မောက်လမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
Comments Off on အင်္ဂလန်ရှိ City of Oxford College, (အစိုးရကောလိပ်) မှ ပေးအပ်မည့် Diploma in English Studies ဘာသာရပ်ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင်တက်ရောက်နိုင်ရန်အတွက် အင်္ဂလိပ်စာအရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲစစ်ဆေးမည်။
အင်္ဂလန်ရှိ City of Oxford College, (အစိုးရကောလိပ်) မှ ပေးအပ်မည့် Diploma in English Studies ဘာသာရပ်ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင်တက်ရောက်နိုင်ရန်အတွက် အင်္ဂလိပ်စာအရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲစစ်ဆေးမည်။
Posted by Lin Naung | December 8, 2014 | News, Training/Education
အင်္ဂလန်ရှိ City of Oxford College, (အစိုးရကောလိပ်) မှ ပေးအပ်မည့် Diploma in English Studies ဘာသာရပ်ကို City of Oxford College ၏ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် တစ်ဦးတည်းသောအသိအမှတ်ပြု ပညာရေး စင်တာဖြစ်သည့် iAcademic Institute တွင်တက်ရောက်နိုင်ရန်အတွက် အင်္ဂလိပ်စာအရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲစစ်ဆေးမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။
အဆိုပါအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲကို ဒီဇင်ဘာလ (၂၀) ရက်နေ့ နံနက် (၁၀) နာရီ အချိန်တွင် iAcademic Institute တွင် စစ်ဆေးပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူများ၊ တက္ကသိုလ်တက်ရောက်နေဆဲ ကျောင်းသ၊ူ ကျောင်းသားများ ၊ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက်နေသူများ ၊ ဘွဲ့တစ်ခုခု ရရှိထားပြီးသူများ ၀င်ရောက်ဖြေဆိုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ဖြေဆိုလိုသူများသည် iAcademic Institute ဖုန်း : 09254831911, 09420030943 တွင် ကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး အသေးစိတ်သိရှိလိုပါကလည်းဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Comments Off on Myanmar Infrastructure Group ၏ ၀န်ထမ်းခေါ်ယူမှု အစီအစဉ်
Myanmar Infrastructure Group ၏ ၀န်ထမ်းခေါ်ယူမှု အစီအစဉ်
Posted by Lin Naung | December 8, 2014 | Career Opportunity, News
ရင်းနှီးမြှပ်နှံစီမံခန့်ခွဲမှု ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သော Myanmar Infrastructure Groupသည် ရန်ကုန်မြို့တွင်းရှိ Telecom Operator များနှင့် ချိတ်ဆက်၍ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
ယခုလက်ရှိအချိန်တွင် အဆိုပါကုမ္ပဏီတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါရာထူးများUrgent လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။ စိတ်ပါဝင်စားသူများအနေဖြင့် အောက်ပါလင့်ခ်ကိုတိုက်ရိုက်နှိပ်ပြီးအလုပ်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
Legal Contract Coordinator http://www.myanmarjobsdb.com/jobs/legalcontracts-coordinator/
Site Acquisition Coordinator www.myanmarjobsdb.com/jobs/site-acquisition-coordinator/
Construction Site Supervisor Bts Site Builds Males (3 Males) www.myanmarjobsdb.com/jobs/construction-site-supervisor-bts-site-builds-male-3-post/
Comments Off on University of Chester, UK ၏ ( ၁ ) နှစ် MBA Course ကို စင်ကာပူနိုင်ငံ Diemnsions International College တွင်တက်ရောက်ရန် လာမည့် Jan 2015 Intake အတွက်ဝင်ခွင့်များစတင်လက်ခံပြီ။
University of Chester, UK ၏ ( ၁ ) နှစ် MBA Course ကို စင်ကာပူနိုင်ငံ Diemnsions International College တွင်တက်ရောက်ရန် လာမည့် Jan 2015 Intake အတွက်ဝင်ခွင့်များစတင်လက်ခံပြီ။
Posted by Lin Naung | December 4, 2014 | News, Scholarship
မြန်မာနိုင်ငံမှဘွဲ့တခုခုရရှိပြီး အသက် (21) နှစ်ပြည့်ပြီးသူများအတွက် Master of Business Administration (MBA) ဘွဲ့ကို Dimensions International College, Singapore တွင် (1)နှစ်တက်ရောက်ရုံဖြင့် UK နိုင်ငံ University of Chester မှချီးမြှင့်သောဘွဲ့ကိုရရှိနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
University of Chester သည် UK နိုင်ငံတက္ကသိုလ်လောကတွင်အစောဆုံးတည်ထောင်ခဲ့သောတက္ကသိုလ်ကြီးများထဲ
တွင်တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်သည်။ 2013 Guardian University Guide အရ UK နိုင်ငံ၏ တတိယမြောက် တိုးတက်မှု အမြင့်ဆုံး တက္ကသိုလ်ကြီး တခု ဖြစ်ပါသည်။ UK နိုင်ငံတွင် စီးပွားရေး နှင့်စီမံခန့်ခွဲ မှု ဘာသာရပ်များကို သင်ကြားပို့ချပေးလျှက်ရှိသောကျောင်းကြီး ( ၁၁၆ ) ကျောင်းအနက် Ranking ( 37 ) ရရှိထားသော တက္ကသိုလ်ကြီးလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ဒါ့အပြင် UK နိုင်ငံ၏အဆင့်မြင့် ပညာရေး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတက္ကသိုလ် ၁၂၀ အနက် Ranking ( 52 ) ရရှိသော ကျောင်းကြီး တခု လည်း ဖြစ်ပါသည်။
မြှင့်တင်ပေးနိုင်သောဘာသာရပ်မျိုးဖြစ်သည့်အတွက် Advanced management skills များကို ထိထိရောက်ရောက် အချိန်တိုအတွင်းလေ့လာနိုင်မည့် ဘာသာရပ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။
Dimensions International College, Singapore City Campus တွင် General MBA အပြင် project Management အထူးပြုဘာသာရပ် အနေဖြင့်ပါ ရွေးချယ်တက်ရောက် နိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။
ယင်းMBA program သည် ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏ Critical thinking skill, Research skill နှင့် Analysis skill တို့ကို တစ်ဦးချင်း (သို့) အုပ်စုလိုက် Team work ပုံစံဖြင့် မြှင့်တင်ပေးရန် ရည်ရွယ်ချက်ထား သင်ကြားပို့ချပေးနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် Assignments, presentation, Case Study, Individual and Group project တို့ကို Report နှင့် Exam ပုံစံမျိုးဖြင့် ကျောင်းသားကျောင်းသူမျာ၏ skill ကိုမြှင့်တင်သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
သင်ကြားမည့်ဘာသာရပ်များအနေဖြင့် General MBA တွင် – Leadership Learning and Continuous Professional Development, Marketing Across Boundaries, Finance for Managers, Leading and Managing People, International Business Strategy, Strategic Management, Preparing for Research, Management Project တို့ဖြစ်ပြီး ဘာသာရပ်တခုစီတွင် အနည်းဆုံး Credit points 20 မှ 40 အတွင်း သင်ကြား ရမည်ဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း MBA ဘွဲ့ရရှိရန် အတွက် credit points 180 သင်ကြားရမည် ဖြစ်ပါသည်။
MBA ( specialization Project Management ) တွင်- Leadership Learning and Continuous Professional Development, Marketing Across Boundaries, Finance for Managers, Leading and Managing People, Strategic project management, Managing Excellence in Process and Projects, Preparing for Research, Management Project တို့ကို သင်ကြားပေးမှာ ဖြစ်ပါသည်။
Jan 2015 intake လျှောက်ထားလို သူမြန်မာကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက် စင်ကာပူဒေါ်လာ 10000 ( ကျောင်းစရိတ်၏ ၃၀ % ကျော်) ကိုပညာသင်ဆု အဖြစ် ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်သောကြောင့် စိတ်ဝင်စားသူများနှင့် ကျောင်းလျှောက်ထားလိုသူများ Dimension International College ၏ မြန်မာရုံးခွဲ Dimension Education Center, အခန်း ( ၈၀၃ ) ၈ လွှာ ပန်းခြံတာဝါ၊ မြေနီကုန်း၊ စမ်းချောင်း Ph..09 4500 44117, 09 421076858 သို့အမြန်ဆုံးဆက်သွယ် စုံစမ်းမေးမြန်း နိုင်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
Comments Off on အမေရိကန် အခြေစိုက် Interface Incorporation မှ ၀န်ထမ်းခေါ်ယူခြင်း အစီအစဉ်
အမေရိကန် အခြေစိုက် Interface Incorporation မှ ၀န်ထမ်းခေါ်ယူခြင်း အစီအစဉ်
Posted by Lin Naung | November 27, 2014 | Career Opportunity, News
အမေရိကန် အခြေစိုက် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း ကော်ဇောများကို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် နှင့်အညီ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး ထုတ်လုပ် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေသာ Interface Incorporation ကုမ္ပဏီကို ၁၉၇၃ ခုနှစ်တွင် စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ကုမ္ပဏီသည် အမေရိကန် နိုင်ငံ Atlanta တွင် ရုံးချုပ်အခြေစိုက်ပြီး ကမ္ဘာ့တိုက်ကြီး (၄) တိုက်တွင် ကုန်ပစ္စည်းများကို ထုတ်လုပ်ပြီး နိုင်ငံပေါင်း ၁၁၀ ကို ရောင်းချလျက်ရှိပါသည်။
ယခုလက်ရှိ အချိန်တွင် မြန်မာပြည် ရုံးခွဲတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် Account Executive ရာထူး လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။ အလုပ်လျှောက်ရန် စိတ်ပါဝင်စား သူများအနေဖြင့် အောက်ပါလင့်ခ်ကို တိုက်ရိုက်နှိပ်၍ အလုပ် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
Comments Off on City of Oxford College, UK မှ ပေးအပ်မည့် Diploma ဘာသာရပ်များ ကို အလုပ်လုပ်ရင်း တက္ကသိုလ်တက်ရင်း ပြည်တွင်းမှာပင် ရယူနိုင်ပြီ …
City of Oxford College, UK မှ ပေးအပ်မည့် Diploma ဘာသာရပ်များ ကို အလုပ်လုပ်ရင်း တက္ကသိုလ်တက်ရင်း ပြည်တွင်းမှာပင် ရယူနိုင်ပြီ …
Posted by Lin Naung | November 24, 2014 | News, Training/Education
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၏ အစိုးရ ကောလိပ် တစ်ခု ဖြစ်သော City of Oxford College မှပေးအပ်မည့် ဒီပလိုမာ ဘာသာရပ်များကို ပြည်တွင်းမှာပင် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့် တက်ရောက်နိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။
– Dec 2014 တွင် ဒုတိယအကြိမ်တန်းခွဲသစ်များဖွင့်လှစ်မည့် ဘာသာရပ်များမှာ
( 1 ) Diploma in Business Management
(2) Diploma in teaching & Assessing for Young Learners
(3) Diploma in English Studies တို့ဖြစ်ပါသည်။
-ဘာသာရပ်များအားလုံးကို ရုံးချိန်ပြင်ပ စီစဉ်ထားရှိပြီး တပတ်လျှင် ( ၄ ) ရက် Diploma တစ်တန်း လျှင် ( ၅ ) လကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ – ( ၁၀ ) တန်းအောင်မြင်ထားသူများ ၊ တက္ကသိုလ်တက်ရောက်နေဆဲ ကျောင်းသူကျောင်းသားများ ၊ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက်နေသူများ ၊ ဘွဲ့တစ်ခုခု ရရှိထားပြီးသူများ တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
– Diploma in Business Management Course တွင် စုစုပေါင်း ဘာသာရပ် ( ၆ ) ခု Credit points 48 ခုသင်ကြားရမည်ဖြစ်ပြီး စီးပွားရေးနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အခြေခံ ဘာသာရပ်များကို စနစ်တကျ သင်ကြားပေးမှာ ဖြစ်ပါသည်။
-နာမည်ကြီးတက္ကသိုလ်များမှစီးပွားရေးနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု မဟာဘွဲ့ရ ဆရာ ဆရာမ များကိုယ်တိုင်အနီးကပ် ကြီးကြပ် သင်ကြားပေးမှာ ဖြစ်ပါသည်။
-တက်ရောက်မည့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအနေဖြင့် စီမံခန့်ခွဲမှု သဘောတရားများ၊ အခြေခံစီးပွားရေး နည်းဗျူဟာများ ကို မိမိကိုယ်တိုင် ထိုးထွင်း သိမြင်လာပြီး လုပ်ငန်းခွင်တွင် ပြန်လည် အသုံးချ နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အင်္ဂလန်မှ ချမှတ်ထားသည့် သင်ရိုးများအတိုင်း နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ သင်ယူလေ့လာရမည့် အခွင့်အရေး ကောင်း တစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။
– Diploma in teaching & Assessing for Young Learners Course တွင် စုစုပေါင်း ဘာသာရပ် ( ၆ ) ခု Credit points 48 ခုသင်ကြားရမည်ဖြစ်ပြီး ဆရာအတတ်သင်ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ များကို သိရှိပြီး ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများ ၊ International School များ Pre School များတွင် ဆရာ ဆရာမ လုပ်လိုသူများ အတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်ပြီး အဆိုပါ ဒီပလိုမာသင်တန်းကို ဖွင့်လှစ်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
-လက်ရှိ အဆိုပါကျောင်းများတွင် ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်နေသူများပါ International Teaching Method များ Curriculum Planning အပိုင်းများ Assessment in Early Childhood Education အပိုင်းများကို စနစ်တကျ သိရှိလာစေရန် တက်ရောက်သင့်သော ဒီပလိုမာဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်။
– Diploma in English Studies Course တွင် စုစုပေါင်း ဘာသာရပ် ( ၆ ) ခု Credit points 48 ခုသင်ကြားရမည်ဖြစ်ပြီး ပုံမှန် English (4) Skills အပြင် Effective Speaking & presentation အပိုင်းများ Workplace English စသည်တို့ကိုပါ သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါသည်။
-City of Oxford College , UK မှဘာသာရပ်အလိုက်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများမှ Student Works, Assessments များကို iAcademic Institute တွင်နှစ်စဉ် External Verifier ( EV ) လာရောက်စစ်ဆေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
-Dec ကျောင်းဝင်ခွင့် Course တစ်ခုစီတိုင်းအတွက် လူဦးရေ ကန့်သတ်ချက်ရှိပြီး တက်ရောက်လိုသူများ iAcademic Institute ( ph no : 09420030943 ) No (803) 8th Floor, Garden Tower, Myaynigone Tsp, Yangon သို့ အမြန်ဆုံး ဆက်သွယ် စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Comments Off on Nestlé Indochina Young Leaders Program 2015
Nestlé Indochina Young Leaders Program 2015
Posted by Lin Naung | November 20, 2014 | Career Opportunity, News
At Nestlé, the world’s leading Nutrition, Health and Wellness Company, we believe that people are the most valuable asset. We place high value on the talent of all our employees irrespective of their nationality, culture, ethical origin or gender. We foster an environment where people’s talents are nurtured and everyone’s skills, efforts and energies are directed toward meeting the company goals.
More than one third of Nestlé top management and leaders worldwide has started their careers in Nestlé from the Management Trainee Program locally and internationally.
By starting your life asaTrainee in our Nestlé Indochina Young Leaders Program, you will learn and experience the excitements ofafast-paced and competitive nature of FMCG business, developing your insight and leadership capability at an early stage to achieve your full potential both professionally and personally, to stand out and possibly become one of our business leaders in Nestlé Indochina Region (Thailand, Vietnam, Myanmar, Laos and Cambodia).
Withina24-month development program, the successful trainees may be offered with the opportunity to gain diverse experiences and to participate in International Development Program at Nestlé Headquarter in Switzerland and/or inspiring programs in other Nestlé markets based on performance assessment and calibration.
•Myanmar, age not over 26 years
•At leastaBachelor’s Degree holder in Commercial (Sales & Marketing) from leading local or international university (minimum GPA 3.5)
•A fresh graduate or those with maximum2years’ experience
•Fluent in verbal and written English (TOEIC score: 700; or TOEFL score or IELTS score is equivalent)
•Passion to win and grow careers in Commercials
•Highly flexible and adaptable to new diversity cultures
•Highly result focused with strong leadership, teamwork and passion for great performance
•Willing to be mobile within Indochina Markets
Ms. Bussarin Kaewprasert Recruitment Manager, Indochina Sourcing & Recruitment Nestlé Thailand Office: 999/9 Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok 10330 THAILAND. Tel: (+66 2) 657 8000 Fax: (+66 2) 613 1154 E-mail: bussarin.kaewprasert@th.nestle.com jirapak.dhirasansuwan@th.nestle.com
Ms. Zin Hnaung Aye Human Resources Executive Nestlé Myanmar Office: No-65, 11th Floor, Centerpoint Towers, Corner of Sule Pagoda Road & Merchant Street Kyauktada Township, Yangon, The Republic of The Union Of Myanmar E-mail: zinhnaung.aye@mm.nestle.com
Mechanical Engineer (366 views)
IT Technical Support (334 views)
Accountant (203 views)
Accounts Executive (196 views)
Executive Engineer (163 views)
Jr Quality Assurance Engineer (IT) (160 views)
Sales & Marketing Executive (155 views)
Accounts Executive (146 views)
Human Resources, Recruitment နဲ့ပတ်သက်သော အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး အေဂျင်စီများ၊ သင်တန်းများ၊ အခြား စိတ်ပါဝင်စားသူများ သင်တို့၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ဤဆိုက်တွင် ကြော်ငြာလိုပါက အောက်ပါ အီးမေးလ်နဲ့ ဖုန်းနံပါတ်သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ အီးမေးလ်: sales@myanmarjobsdb.com ဖုန်း: +95-01-201492, +95-09-33122144